खतिवडाको पुनरागमन र कुलमानको बहिर्गमन
सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक किचलोका कारण राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा पुनः सिफारिश हुन नसक्दा अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका डा. युवराज खतिवडा फेरि सत्तामै पुगेका छन्, प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा । उता, नियमित विद्युत् आपूर्तिलगायत सुधार गरी ऊर्जाक्षेत्रमा ठूलै सफलता भित्र्याएका कुलमान घिसिङ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्नियुक्त हुन सकेनन् ।
खतिवडाको विज्ञताको लाभ लिने नै हो भने छद्म जिम्मेवारी दिनुभन्दा खुला जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्थ्यो । यसरी घुमाउरो पाराले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिँदा विकृत नजीर स्थापना भएको छ ।
परिणामका हिसाबले औसत मानिएका तर अर्थतन्त्र राम्ररी बुझेका खतिवडालाई घुमाउरो बाटोबाट अर्थतन्त्र हाँक्ने अवसर फेरि दिइँदै छ भने विद्युत् प्राधिकरणमा ठूलो परिवर्तन ल्याएका घिसिङलाई भने पाखा लगाइएको छ । ओली सरकारको यो निर्णयप्रति सामाजिक सञ्जालमा नागरिकको असन्तुष्टि पोखिएको छ भने कुलमानको समर्थनमा प्रदर्शन नै गरिएको छ ।
विद्वान् अर्थमन्त्रीका रूपमा चिनिए पनि खतिवडाको अढाई वर्षे कार्यकाल यस अघिका अर्थमन्त्रीको भन्दा अब्बल रहेन । प्रचण्ड बहुमतको सरकारको अर्थमन्त्री रहँदा पनि खतिवडाले आफ्नो कार्यकालमा नेपाली अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार गर्न सकेनन् ।
दुई वर्षका लागि राष्ट्रिय सभामा छानिएका खतिवडाले सभाको सदस्य नभए पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार थप ६ महीना देशको अर्थतन्त्र हाँके । उनले अर्थतन्त्रमा केही दीर्घकालीन हित हुने काम गरेका छन् । यद्यपि कोरोना महामारीका कारण देशको अर्थतन्त्र थलिएको बेलामा ठोस र परिणाम अनुभूत हुने खालका कार्यक्रम नल्याउ“दा उनको आलोचना भएको छ ।
डा. खतिवडा अर्थतन्त्रलाई राम्ररी बुझेका व्यक्ति मानिन्छन् । यस्तोमा उनको विज्ञताको लाभ लिने नै हो भने छद्म जिम्मेवारी दिनुभन्दा खुला जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्थ्यो । यसरी घुमाउरो पाराले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिँदा विकृत नजीर स्थापना भएको छ । त्यसैले उनलाई सल्लाहकारमा नियुक्ति दिँदा केही आशंका उठिसकेको छ । सरकारको काम विश्वासको वातावरण बनाउनु हो । तर, जसरी खतिवडालाई जिम्मेवारी दिइएको छ त्यो उनीमाथि अन्याय हुन्छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा उनले काम गर्न नसक्दा आलोचना हुनु एउटा पक्ष हो । तर, जुन बाटोबाट अर्थतन्त्र बुझेको र क्षमतावान् व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइँदै छ त्यो स्वयं खतिवडाको व्यक्तित्वका लागि पनि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।
कोरोना महामारीबाट थलिएको देशको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि अहिले सबल अर्थमन्त्रीको आवश्यकता छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खतिवडालाई आफ्नो विशेष आर्थिक सल्लाहकार बनाएर उनैबाट अर्थ मन्त्रालय चलाउने संकेत गर्नुभएको छ ।
चुनौतीको यो समयमा अर्थ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुनु/पारिनु सकारात्मक संदेश दिँदैन । खतिवडाको अबको भूमिका भनेको घुमाउरो पाराले अर्थ मन्त्रालय हाँक्नु हो । यसले अर्थ मन्त्रालयको सञ्चालनमा गम्भीर समस्या निम्त्याउने सम्भावना छ । अर्थतन्त्र संवेदनशील बनेका अवस्थामा सक्रिय अर्थमन्त्री आवश्यक छ । नेतृत्वविनाको अर्थ मन्त्रालयले पक्कै पनि यो गम्भीर समयमा काम गर्न गाह्रो हुनेछ । अर्थतन्त्र असफल हुनु भनेको समग्रमा देश नै असफल हुनु हो । यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीले सक्षम अर्थमन्त्री खोज्नुपर्ने हो ।
कुलमानको बहिर्गमनले सरकार राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्न पछि हटेको सन्देश दिएको छ । उनको नेतृत्वमा दैनिक १८ घण्टा लोडशेडिङ हुने मुलुक अहिले लोडशेडिङमुक्त भएको छ । घाटामा गएको प्राधिकरण अर्बौं रुपैयाँ नाफामा गएको छ । यसरी कुलमानले जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने काम गरेकाले जनताको समर्थन पाएका हुन् । यद्यपि संस्थाको दीर्घकालीन हितका लागि काम कत्तिको गरेका छन् भन्नेमा टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । उनलाई एक अवधि काम गर्न दिइनुपर्थ्यो अथवा योभन्दा ठूलो जिम्मेवारी दिएको भए पनि हुन्थ्यो । कुनै जिम्मेवारी दिएको भए सरकारको आलोचना हुने थिएन । तर, राम्रो काम गरेको भनी जनताले पत्याएका मानिसलाई कुनै अवसर नदिँदा सरकारप्रति जनता थप आक्रोशित हुने सम्भावना छ ।
ठूलो मन्त्रिपरिषद् अनुचित[२०७७ असोज, १६]
विमानस्थल निर्माणका लागि संघीय र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच पहिलो समझदारी